Waxgaradka iyo culumada magaalada Gaalkacyo oo kala qaadayo ciidamadii ku dagaalamay gudaha magaalada. – Radio Muqdisho
Waxgaradka iyo culumada magaalada Gaalkacyo oo kala qaadayo ciidamadii ku dagaalamay gudaha magaalada.
Waxgaradka iyo culumaa’udiinka Magaalada Gaalkacyo ayaa la filayaa in ay maanta kala qaadaan ciidamada isku hor fadhiya galbeedka magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Waxgaradka iyo culumada ka soo kala jeeda labada qeyb ee magaalada Gaalkacyo ayaa shir ay shalay yeesheen waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis xabad joojin ah iyagoona ka codsaday maamulada labada dhinac inay la shaqeeyaan.
Waxgaradkan ayaa sheegay in ay maanta si deg deg ah u kala qaadi doonaan labada ciidan isla markaana sabibihii keenay dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo dhawaan ay wadahadal ku xalinayaan.
Xaalada magaalada Gaalkacyo ayaa dagan saaka iyadoo shacabkana ay soo dhaweeyeen heshiiska ay Waxgaradka ka gaareen khilaafka magaalada Gaalkacyo.
Maamulka Galmudug oo soo dhaweyey Xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle
Sawiro: Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa Kulan la qaatay Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed